Google Play Music users should transfer their playlists ASAP. ﻿
Google Play Music users should transfer their playlists ASAP.
Google Play Music ကို အသုံးပြုနေသူများအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ playlist များကို အမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့သင့်
ယခုအခါတွင် Google ဟာ သူတို့ရဲ့ Music app ကို Spotify ကဲ့သို့သောပုံစံသို့ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကာ ထိုအရာကို YouTube Music ဟူ၍ အမည်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Option အသစ်ဟာဆိုရင်တော့ သီချင်းများကိုနားဆင်နိုင်စေဖို့နဲ့ အခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက် တစ်လလျှင် ယူရို ၉.၉၉ ကျပ်ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Google Play Music ရဲ့ website ပေါ်မှာတော့ “Google Play Music ကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ သင့်ရဲ့အကောင့်နဲ့ သီချင်း library, playlist များနဲ့ upload များကို အချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုအတွင်းပြောင်းရွှေ့ရပါမယ်။ အကယ်၍ သင့်ရဲ့တေးသီချင်းများကို သိမ်းဆည်းထားလိုပါက အမြန်ဆုံး download ပြုလုပ်ထားပါ။ အခုအချိန်မှာ သီချင်းများကို မဖျက်ပဲထားပါက ကျွန်ုပ်တို့က ကျန်ရှိနေသော သီချင်းများနဲ့ ဒေတာများကို shutdown ပြုလုပ်ခြင်း ပြီးဆုံးချိန်တွင် အလိုအလျှောက်ဖျက်ပြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။” ဟူ၍ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်ကို နောက်ဆုံးထားလုပ်ဆောင်ရမယ့် deadline ကတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်ပြီးဆုံးမည့်ရက်ကို Google Play Music ရဲ့ အဆုံးသတ်ချိန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ သို့ပါသော်လည်း ယခုအချိန်အထိမှာတော့ အဆိုပါအခမဲ့ transfer tool ကို music.youtube.com/transfer တွင်ဆက်လက်၍ရရှိနိုင်သေးတဲ့အတွက် Google Play Music ကို အသုံးပြုနေသူများအနေနဲ့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြောင်းရွှေ့သင့်ပါတယ်။